10 Zvikonzero Zvikonzero Zvekutumira Zvimwe Zvirimo paSocial Media yeBhizinesi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Social Media, Social Media Marketing, Yemagariro Midhiya Strategic
Kugadzira yekugadzira foto collage harisi basa riri nyore. Mune ino post, isu tichavhara gumi zvikonzero nei uchifanira kuwedzera yako gutsikana on evanhu vezvenhau. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti iyi ndiyo nzira yeramangwana. Iri zano rekushambadzira ndiyo nzira yakanakisa yekuwedzera purofiti yako!
Inguva yekurega kati ichibuda muhombodo kana zvasvika kune inogadzira maturu epamhepo zvishandiso! Click pano kutsvaga nzira yakanakisa yekugadzira izvo zvirimo zvakanyanya kuti ugone kuwana mamwe mafambiro.
Tarisa uone pazasi:
Kutumira Zvimwe Zvemukati kunozochengeta Vatengi Vako Vavaraidzwa uye Vachiita Newe:
Mazuvano, kune akasiyana maturusi aripo ekukubatsira iwe kusvika kune vakawanda vateereri, saka iwe unofanirwa kufunga nezve kushandisa mamwe acho. Izvo zvakakosha kushandisa chete zvakanakisa zvezvakanakisa, senge semuenzaniso yakanakisa saiti yekutenga vateveri ve Twitter iyo yaunogona kuwana yakaongororwa paQuantum Marketer's Website.
Kutumira Zvimwe Zvemukati Kunovaka Mbiri Yako YeBrand uye Kugadzira Inowanikwa Pamhepo:
Izvo hazvina kukwana kuve neFacebook peji ine imwechete chete posvo pairi mazuva mashoma kana vhiki.
Zvemagariro midhiya zvinoda kugara zvichigadziriswa kuitira kuti vanhu vazive zvaunopa. Izvi zvinovatendera iwo mukana wekuda, kutaura uye kugovana zvinyorwa zvavanofarira kuverenga.
Zvimwe zvirimo zvichagadzira zvirinani Kuvapo Kwepamhepo:
Zvemagariro midhiya ndiyo nzira yakajairika yekuwana ruzivo nezvekambani yako nemasevhisi ayo.
Kana mumwe munhu asati amboona yako Facebook peji zvisati zvaitika, vape iwo iwo chaiwo maonero. Ivo vari kuzokurirwa nezvose zvinyorwa kana iwe ukatumira chimwe nechimwe chigadzirwa iwe chaunopa zvakasiyana.
Izvi zvinodaro nekuti panowanzo kuve nevatatu kana vana panguva imwe chete. Izvi zvinoita kuti varege kudzvanya pane chero chazvo, uye zvakare zvinoreva kuti ivo havasi kuona zvirimo zvekambani yako pasocial media.
Mimwe Inotungamira Kubva Kuparadzira Kufarira mune Izvo Iwe Zvaunopa:
Kana iwe ukashandisa iyo inogadzira collage online yezvinyorwa kamwe chete pamwedzi kukambani yako Facebook, saka vateveri vako vanogona kukanganwa nezve peji nekuti hapana chinombotumirwa.
Zvakanakisisa kutumira nguva dzose. Nenzira iyi panogara paine chimwe chinhu chinonakidza kuti vanhu vabatanidze pamwe nekudyidzana nacho. Izvi zvinogona kuve mutsauko pakati peye kana maviri matsva anotungamira pamwedzi pane zero.
Kutumira Zvimwe Zvemukati zvinobatsira Iwe Kuwana Chiremera muYako Indasitiri:
Iyo inogadzira kollaji pamhepo inokutendera iwe kuti uwane mukana wakajeka pamusoro pevanokwikwidza. Izvi imhaka yekuti iyi yemahara kollaji inogadzirwa zviri nyore kuti ishandiswe.
Aya ndiwo vanhu vazhinji vanogara vachiisa chimwe chinhu chitsva uye chinonakidza kuita navo.
Iyo zvakare inzira huru yekuzvisimbisa seyokuenda-muindasitiri yavo, zvinoreva kuti vazhinji vangangove vatengi vanozovatevera pane vezvenhau.
Inovandudza Yako Yekutungamira Generation Rate:
Kana vanhu vakaona kuti une zvakawanda zvekutumira nezve macollage kana kana imwe chete posvo pavhiki, ipapo ivo vanonyanya kuve nemukana wekukubata iwe kune chako chigadzirwa kana sevhisi.
Izvi zvinodaro nekuti pane zvakawanda zvakatumirwa kubva kumapoka akasiyana anowanikwa kune vanhu pachinzvimbo cheimwechete posvo nezve chimwe nechimwe chigadzirwa.
Nekuda kwehunhu hwechikara, (kutarisisa kwetarisiro yedu) vatengi vedu havanyanyi kuda kutumira mamwe mameseji. bhizimisi varidzi vasina kuona collage post. Izvo zvakakosha kubatanidza izvo zvatinazvo kupa vatengi vedu mune imwechete yakabatana positi. Vimba neni, edza izvi uye uone kuti iwe unokurumidza sei kukwezva mitsva mitsva.
Iyo Inosimbisa Yako Yemagariro Midhiya Kuvapo pane Mamwe Mapuratifomu Akaita Instagram uye Twitter:
Kana mumwe munhu akakutevera pane imwe media media chikuva asi kwete imwe, ivo vanogona kuona kuti iyo gutsikana iwe unonyorera zvigadziriso papuratifomu kazhinji.
Kana iwe uchida kuvaona vachitevera rako rimwe peji, saka kushandisa chinogadzira kollaji pamhepo kunobatsira kuvanyengerera kuti vatore nguva yekuvatevera ipapo.
Nenzira iyi, ivo vanozokwanisa kutsvaga ese e-collage-guru zvinyorwa zvaunogadzira munzvimbo imwechete pane kuti utsvage maprofiles avo munzvimbo dzakawanda!
Kutumira Zvimwe Zvemukati Zvinotungamira kune Nani Kutungamira:
Izvi zvinodaro nekuti vanhu vanotarisa pamabhizinesi mapeji ane zvakawanda zvekuvandudzwa pamusoro peavo vasina zvakawanda zviitiko zviri kuitika.
Vanhu vanoda kambani inoshanda mukuvandudza peji rekambani yavo kuti vakwanise kuwana ruzivo rwakanaka nezve izvo masevhisi avanopa.
Zvimwe zvirimo zvichaita Kuti Vanhu Vafarire Izvo Zvaunofanira Kutaura:
Izvo zvakare zvinopa chiitiko chiri nani kune vatengi vanobva kunzanga midhiya.
Mamwe macolgeges anoreva zvimwe zvinonakidza zvinyorwa pane yako kambani peji kuitira kuti panogara paine chimwe chinhu chitsva uye chinobata pavanoshanya icho!
Kutumira Mamwe Collages Kunotendera Iyo Collage Mugadziri Pamhepo kuti Ikubatsire Iwe Kukura seMhizha:
Izvi zvinogona kutungamira kune mamwe anoshamisa mikana!
Inovapawo iwo chikuva apo basa ravo rinogona kuonwa nevamwe maartist kana vangangove vatengi vangangodaro vasingazive nezve masevhisi avo neimwe nzira.
Kuva savy collage master zvauri, iwe unofanirwa kutumira kamwe chete pazuva kana uchinyatsoda kuratidzwa uku.
Nekudaro, kaviri pazuva pazuva zvingave zvirinani nekuti ipapo kune akawandisa zvakapetwa kolaji kuratidza!
MUGUMO WEKUPEDZISIRA: Collage Mugadziri Pamhepo + Chako Chigadzirwa = WIN-WIN
Kune zvikonzero zvakawanda zvinoita zvemukati chikamu chakakosha cheichi chiitiko kana iwe uchida kuve neakawanda vhoriyamu kune yako webhusaiti kana vamwe vatengi veako brand.
Kana iwe ukaenda kune chero yemagariro enhau network iyo iwe unayo account pairi, humbowo hwemabhizinesi kuwana kutarisisa kwakanaka uchishandisa mugadziri wekoriki kunojeka.
Saka ikozvino iwe unoziva zvimwe zvikonzero gumi zvekuti unofanirwa kutanga kushandisa ichi chinoshamisa chishandiso. Enderera mberi, gadzira rako rekushambadzira zuva uye edza ruoko rwako pane inogadzira kollaji pamhepo.
Submit a Comment kukanzura mhinduro